थाहा पाउनुहोस् र फाइदा लिनुहोस् यस्तो छ यार्सागुम्बा र यसको महत्व
सेप्टेम्बर 28, 2018 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा
यार्सागुम्बा भनेको हिमाली भेकमा पाइने ढुसी र झुसिल्किरा एकै ठाउँमा जोडिएर रहेको बस्तु हो । यसमा ढुसी र झुसिल्कीरा परस्परमा आश्रित भएका हुन्छन् । यार्सागुम्बाको जीवनचक्रका सम्बन्धमा बनस्पतिविदहरूका अनुसार यो ६ महिना किरा र ६ महिना बनस्पति भएर रहन्छ । त्यसरी हेर्दा बनस्पति जीवित रहे प्राणी मर्ने र प्राणी जिवित रहे बनस्पति मर्ने हुन्छ ।
जमिनमा रहेका पुराना यार्सागुम्बाबाट हावामा प्रशस्त बीऊहरू फैलिरहन्छन् । यी बीऊहरू एक प्रकारका पुतली, झुसिल्कीराको शरीरमा टाँसिन्छन् र त्यहीँ उम्रन्छन् । यी बीऊहरू उम्रेपछि यिनका जराहरू झुसिल्कीराको शरीरमा फैलन्छन् त्यस समयसम्म झुसिल्कीरा हिडडुल गरिरहेकै हुन्छ । यसरी यो बनस्पतिको जराहरूले झुसिल्कीरालाई पुरै ढाक्दै गएपछि झुसिल्कीरा जमिनभित्र गएर मर्छ ।
झुसिल्कीरा जमिनमा मरिसकेपछि बनस्पतिले आफ्नो आहारा त्यही झुसिल्कीराको शरीरबाट लिन्छ र बनस्पति विकसित हुन्छ अर्थात माटोमाथि जिवित रहन्छ माटोमुनि मर्छ । माटोमाथिको बनस्पति माटोमुनिको प्राणीको टाउकोबाट पलाएको हुन्छ यसको रङ्ग कालो हुन्छ जसको टुप्पोमा साना-साना प्वालहरू हुन्छन् ती प्वालभित्र लामा-लामा थैला हुन्छन् र प्रत्येक थैलामा मसिना-मसिना लामा-लामा बीऊ हुन्छन् ।
यार्सागुम्बाको प्रयोग कामोत्तेजक औषधि तथा स्मरण शक्तिवर्द्धक औषधिको रुपमा प्रयोग गरेको कुरा विभिन्न पुस्तकहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर यसलाई औषधिको रुपमा त्यतिमा मात्र प्रयोग गरिने कुरा नेपालको आयुर्वेदिकले मान्न तयार छैन । उहाँहरूका अनुसार यस बाहेक अन्य औषधिमा पनि यार्सागुम्बाको प्रयोग गरिन्छ । यार्सागुम्बा पाइने ठाउँका मानिसहरूका अनुसार यार्सागुम्बा रक्तश्राप रोक्न, काटेको घाउ चाँडै निको पार्न, रगतमासी निको पार्न तथा शरीर दुखेमा पनि यसलाई पिसेर धुलो बनाई खाने गरिन्छ ।
← स्याउ र यसको फाइदाहरु
खगोल बिज्ञान भनेको के हो ? नेपालमा खगोल बिज्ञानको अवस्था कस्तो छ ? →
One thought on “यार्सागुम्बा र यसको महत्व”
Pingback:यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् फिडकरी र यसको प्रयोग